मेरो विश्वाश: ओईलिएको साईनो
जहिले जुन र ताराहरु लुक्छन् आकाशको छात्तीभित्र
कहाली लाग्दो, निस्सार समयको एउटा पाटो बन्छ ।
ठीक तिमीले मलाई त्यस्तै
औसीँका दिनहरु उपहार दिएर गयौ ।
त्यसैले अचेल म ,
हररात विल्कुल शुन्य सन्नाटाको गोलार्धमा पिल्सिरहेछु ।
प्रत्यक रात रित्तो अझै रित्तो बन्दै गईरहेछु ।
अनी उही औसीँमय गोलार्धमा ,
अमुल्य समयहरु जानी नजानी फ्याँकीरहेछु ।
आज मलाई त्यो दैनिकि बिरुद्ध हुन मन लाग्यो
म आँफैसँग लडेर आज यो ब्यर्थको गोलार्धभित्र
समाहित हुन दिईरहेकी छैन ।
मैले त मात्र समर्पण गरेकी थिएँ
शरीर दुई भए पनि आत्मा एकै बनेर
जीवनका ओकाली,ओरालीहरु सगैँ हिडौँला भनि
चोखो कसम खाएकी थिएँ
आस्था,भरोसा र त्यागको त्रिबेणीमा
मेरो वर्तमान र भबिष्यहरु बिना सम्झौता
तिम्रै नाममा जोडीदिएकी थिएँ ।
तिमी नै भन ,
तिमी प्रति निश्छल भावनामा समर्पित हुनु
र बदलामा पीडा मात्र पाउनु के मैले ठुलो भुल गरेँ र ?
मैले मेरो अस्तित्वलाई तिम्रो स्वाभिमानसँग स्वीकार गर्दा
कँही, कतै कमी देखियो र ?
आँखाहरुमा नकोरिएका सपनाहरु बुन्नु
अनी बाचा, बन्धनभित्र बाँधिने रहरहरुमा
तिम्रो स्वतन्त्रताको हनन पो गरे कि ?
तिम्रो लागि प्रेम सस्तो खेल भएछ भने
मलाई किन यति सार्हो महँगो र गर्हौ भईरहेछ ?
आज यो मन कठोर भएर उभिएको छ र भन्दैछ,
भो अबदेखि तिमी मलाई बिथोल्न नआउ ।
चर्केको मुटुभित्र झन ब्यथा बढाउन नआउ ।
निर्जिव हुन लागेका भावनाहरु लाई
फेरी ठेस पुर्याउन नआउ ।
आशा र सपनाहरु भुलेको मान्छेलाई
ब्यर्थमा झस्काउन नआउ ।
नयाँ पाइलाहरुको शुरुवातमा तगारो बनि
मेरो जीवनमा तिमी भुलेर पनि नआउ ।।
Ashesh said on November 15, 2009 at 4:50 AM
हैन यो मया पिरिममा खालि धोका मात्रै हुन्छ कि क्या हो? मलाई त डर लागि सक्यो भन्या !!
Eternal said on November 15, 2009 at 11:23 PM
Truly...I am in tears right now Asha ji... mero maan bhitra...kata kata chiso banayo...kabita le.....kahi merai bhawana...kornu bhayeko ta hoina...kahi katai ma nai ta...yo kabita ko patra parina....
Sachai akha rasila bahyeka chan... :'(
Basanta said on November 17, 2009 at 10:21 PM
भाव निराशावादी भएपनि प्रस्तुति सशक्त छ, पिडालाई सबैसंग बाँड्न कविता सक्षम छ। अरु पनि आऊँदै गरुन्, आशाको कलम नरोकियोस्।
एक ठाऊँमा "---समयहरु" प्रयोग गरेको रहेछ, त्यो अलि नमिल्दो प्रयोग हो कि जस्तो लाग्छ, "समय" मात्रै प्रयोग गर्दा ठिक होला भन्ने लाग्छ मलाई।
दूर्जेय चेतना said on November 25, 2009 at 7:27 AM
कता कता मेरो मनमा झिल्का हान्यो। सशक्त प्रस्तुति सगै साह्रै सुन्दर भावहरु पाए मैले त।
चूडामणि/मणि said on November 25, 2009 at 10:32 AM
"आज मलाई त्यो दैनिकि बिरुद्ध हुन मन लाग्यो
समाहित हुन दिईरहेकी छैन ।"
अशाजी गहिरो पीडाबोध कवितामा भए पनि कविता पढ्दा आनन्द आयो | शायद अशल कविता हुनुको अर्थ यहीं होला |अतिनै निश्छल भाव छ कवितामा हृदयको शाश्वत अभिव्यक्ति कविता भएर बहे जस्तो | शैलीगत हिसाबले देखापरेका केही कमजोरीहरूले स्वत : माफी पाए मबाट |